Ogaden News Agency (ONA) – Kooxda TPLF oo Labo Garab oo Waawayn Ukala Jabtay.
Kooxda TPLF oo Labo Garab oo Waawayn Ukala Jabtay.
Posted by Dulmane	/ December 28, 2016
Sida aan horaanba idiinku soo gudbinay kooxda TPLF ayaa kufashilantay daminta iyo latacaalida kacdoonada mudada sanadka kabadan kasocda guud ahaan wadanka ay kooxdu xooga kumaamusho ee Itoobiya.
Kacdoonadan ayaa sanadkii tagay ee 2015 kabilowday Gobolka Oromiya wuxuuna si dhakhsa ah ugu fiday Gobolka Axmaarada iyo Gobolo kale oo ay dagan yihiin qoomiyado mudo dheer kusoo jiray gumaysi. Dhinaca kale waxaa joogsi la’aanta kacdoonada owgeed khilaaf xoogan uu dhexmar kooxda TPLF gaar ahaan talisyada sirdoonka iyo waliba horjoogayaasha TPLF.
Xog rasmi ah oo naga soo gaadhay Addis Ababa ayaa muujinaysa in khilaafkii abid ugu xumaa uu udhaxeeyo gudoomiyaha TPLF ahna madaxa waxa loogu yeedho Kilalka Tigree Abay Woldu oo kusugan magaalada Maqale iyo Debretsion Waldemikael oo ah madaxa TPLF ee Addis Ababa.
Sida warku sheegayo Abay Woldu waxaa garabkiisa kamid ah General Gebre Dila oo ah madaxa sirdoonka ciidamada Itoobiya halka Debretsion Waldemikael ay xulufo yihiin Getachow Asafa oo ah madaxa Sirdoonka guud ee wayaanaha.
Labadan garab ee kooxda TPLF ay ukala jabtay ayaa xarumo kakala samaystay Addis Ababa iyo Maqala waxaana kala hogaaminaya saraakiisha kooxda ugu caansan.
Dhinaca kale shucuubta kala duwan ee Itoobiya oo mudo 25 sano ah ay kooxda TPLF gumaadaysay ayaa si isku mid ah udoonaya in ay dadkooda xornimo gaadhsiiyaan waxaana soobaxay siyaasiyiin caan ah oo sifuran uga hadlaya xaalada dadka lagumaysto.